vendredi, 27 mars 2020 21:25
Sambava: Niampy iray ny olona maty noho fihinanana atsantsa
Namoy ny ainy tamin’ny 7ora sy sasany harivan’ity zoma 27 marsa 2020 ity ihany koa i Jao Léonard, raim-pianakaviana, 57 taona, iray tamin’ireo efatra narary ary niditra hopitaly tao amin’ny CHRR Besopaka noho fihinanana atsantsa avy tany Anjiakely Kaominina Farahalana tamin’ny herinandro lasa teo iny. Roa aminy izao no namoy ny ainy, mbola misy zaza roa mianadahy izay tena mbola reraka tsaboina ao amin’ny hopitaly.
vendredi, 27 mars 2020 10:23
Toamasina: Ny CHU Morafeno no natokana handraisana ireo mararin’ny COVID-19
Nanatanteraka iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, tany Toamasina, ny Praiminisitra Ntsay Christian ny alakamisy 26 marsa 2020, nijery ny fampiharana ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana hifehezana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina “coronavirus”, sy ny fihodinan’ny « Centre opérationnel de commandement COVID-19 » natsangana any an-toerana, ary ireo zavatra tsy ampy na ny mety ho olana ateraky ny fiatrehana izao tranga manokana eto amin’ny firenena izao. Namory ireo tompon’andraikitra rehetra tany an-toerana ny tenany, nanome toromarika, ary notronin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena izy nandritra izany. Nanao antso avo tamin’ny vahoakan’i Toamasina ny Praiminisitra mba hanaraka amin’ny antsakany sy andavany ny toromarika omen’ny tompon’andraikitra any an-toerana hanajàna ireo fepetra napetraka, indrindra momba ny fihibohana (confinement) : « mila manao ezaka isika ao anatin’ny 14 andro izay nadraisantsika fanapahan-kevitra », hoy ny Praiminisitra.
jeudi, 26 mars 2020 22:21
Coronavirus: Manana toerana afaka andraisana marary 800 i Madagasikara, fanafody hitsaboana marary 2 000
23 ny tranga voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin’ity andron’ny 26 marsa 2020 ity, tranga vaovao ny 4 amin’ireo. Nohamafisin’ny filoha Andry Rajoelina io nandritra ny fiakarany tao amin’ny fahitalavi-pirenena io hariva io, namaliany mivantana ny fanontanian’ny olom-pirenena avy amin’ny faritra samihafa, niantefa taminy manoloana ity valanaretina ity. Nandritra izany koa no nilazany fa misy fitaovana fitiliana ahazoana vokatra haingana fanampiny tonga androany ahafahana manafaingana ny fitiliana ireo mpandeha rehetra tamin’ireo sidina rehetra tonga faramparany avy any ivelany, koa raha sanatria misy fiitarany ity valanaretina ity dia efa nanomana toerana ahafahana mandray marary hatrany amin'ny 800, ary manana fanafody hitsaboana marary 2 000 i Madagasikara.
jeudi, 26 mars 2020 22:08
jeudi, 26 mars 2020 21:19
Famatsiana: Miditra an-tsehatra mitatitra vary makeny amin’ireo mpaninjara madinika ny Ministeran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana
Nirotsaka an-tsehatra Ministeran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana mitatitra vary makeny amin’ireo mpaninjara madinika hanamorana ny fanjifan’ny olona ireo entana ilainy andavanandro. Natomboka teto Antananarivo sy ny manodidina androany ny fitsinjarana ary hitohy. Nanome tanana ny Ministeran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ny zandarimaria, tamin’ny fiara nitaterana ny vary. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 26 mars 2020 14:35
Toamasina: Tonga mijery ny fifehezana ny valanaretina ny Praiminisitra, ny mpitariposy mitokona
Nitarika korontana ny mpitariposy teto Toamasina androany maraina, mikiry ny hanohy ny asa fiharian’izy ireo na isan’ny tanàna ampiharana ny fepetra fihibohana an-trano toa an’Antananarivo aza ny tanànan’i Toamasina, noho ny Hamehana ara-pahasalamana hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Nisy polisy naratra, voatora-bato hatramin’ny mpanao gazety. Niditra an-tsehatra nanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana. Efa voafehy ny toe-draharaha na mbola misy mikasa ny hamaky trano aza ny sasany.
jeudi, 26 mars 2020 08:26
Coronavirus: Tonga ireo fanomezana avy amin’ilay Sinoa mpanefoefo, Jack Ma, hiadiana amin’ny coronavirus
Saron-tava fiarovana miisa 100 000 sy fitaovam-pitiliana haingana (test rapide) ny tsimok’aretina coronavirus miisa 20 000 no sitrahan’i Madagasikara ; fanomezana avy amin’ny fikambanan’ilay teratany sinoa Jack Ma entina hanampiana ireo firenena miatrika ny coronavirus. Tonga nitsena izany teny amin'ny BANI Ivato ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny solon-tenan'ny OMS eto Madagasikara. Hanampy ny fitiliana efa misy eo anivon’ny Institut Pasteur de Madagascar ireto fitaovam-pitiliana ny coronavirus ireto.
Nahomby ny paikady napetraka hatreto nifehezana an’ity valanaretina ity, hoy ny filoha Andry Rajoelina ny hariva teo, niainga avy eny amin’ny foibem-pibaikoana momba ny coronavirus eny Ivato, raha namintina ny fivoaran’ity valanaretina ity, ka tsy nahitana tranga vaovao hatry ny omaly talata mitatao vovonana ka hatramin’ny 8 ora hariva, tamin’ireo fitiliana natao, fa nijanona ho 19 ireo mitondra ny tsimokaretina coronavirus, ary efa raisin’ny fanjakana an-tanana manontolo ny fitsaboana azy ireo etsy amin’ny hopitaly manarapenitra Andohatapenaka sy ny amin’ny CHU Anosiala Ambohidtratrimo. Ny coronavirus no fahavalontsika, hoy ny filoha Andry Rajoelina, ka mila mifarimbona isika handresena izany. Tonga izao alina izao ireo fitaovana samihafa avy any Chine ahitana : « tests rapides », « combinaison », « masques »... Amin’ny 4 aprily 2020 no ahafahana mandrefy ny fifehezana an’ity valanaretina ity, raha ny nambarany hatrany ary averina hatao fitiliana avokoa ireo rehetra avy any ivelany, tonga tamin'ireo sidina farany tonga teto Madagasikara.
Sady voasazy handoa lamandy ny tompony no narodana avy hatrany ireo Trano fivarotana tsy manara-dalàna sy miorina eny ambony “trottoirs”. Miisa 10 no tratran’ny Polisy Monisipaly sy ny sampan-draharahan’ny Tsena teny Anosibe Angarangarana – Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra. Tsy ekena sy tsy azo andeferana ny fanararaotana amin’izao fotoanan’ny famehana sy ny ady amin’ny valan’aretina Coronavirus izao, hoy ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina. (Jereo Sary Tohiny)
Nisahotaka ny mponina taty amin'ny Kaominina Befotaka-Nord ny sabotsy 21 mars lasa teo nahita vazaha naka sary sy nivezivezy, ka izay tanàna nandehanany dia nandroaka azy avokoa. Niditra antsehatra ny mpitandro filaminana iarovana ny ainy sy ny tsy hitaran'ny korontana aty an-toerana. Nosamborina tao amin'ny Fokontany Antsahafaly, Kaominina ambanivohitra Befotaka izy ary dia notazononina amin'ny Poste Zandarimaria Befotaka-Nord. Nantsoina ireo mpitsabo, fa tsy nahitana tranga mampiahiahy ny fahasalamany, nefa kosa niantso ny lehibe ireo mpitsabo aty an-toerana, dia nilaza ny tany fa tazomy ao ihany aloha ilay vazaha. Tsy nilamina ny tanàna satria ny olona tsy nandry ny saina, ireo mpitandro ny filaminana ihany koa, na ny Polisy na ny Zandary dia mba manahy ny fahasalamany satria na takom-bava aza tsy misy.